Malagasy Ranoray | Just another WordPress.com weblog
Filed under: Uncategorized — serasera @ 10:09 am
Rehefa avy nifampiresaka tamin’i Mahefa ao amin’ny www.baiboly.org aho dia nieritreritra ny hampiditra dikanteny vaovao ao amin’io site io. Natomboka omaly ary ny fanangonana ny dikanteny katolika. Nisy anefa ny sosokevitra mba hametrahana koa ny DIEM (Dikanteny iombonana) koa natao koa izany alina ary nosokafana androany.
Ireto izany ny tetikasa Baiboly amin’izao fotoana izao.
Dikanteny Iombonana http://baiboly.serasera.org
Dikanteny Katolika http://ws.loharano.org
Filed under: Uncategorized — serasera @ 9:07 am
Nampiasaina hamoahana ny pub tao amin’ny serasera ny site ws.loharano.org. Voatery najanona anefa izany alina satria nihoatra ny bande passante nilaina. Dia voatery naverina ao amin’ny doka.serasera.org indray aloha mandra-pahazo bande passante ngeza kokoa.
Miezaka manamboatra tsikelikely ireo espaces pub azo amidy aho amin’izao fotoana izao ary mitady fomba koa hahamora ny fividianan’ny olona izany espaces izany.
Filed under: Uncategorized — serasera @ 9:17 am
Zavatra hita amin’izao dia manodidina ny 4500 isanandro eo ny mpamangy ny serasera.org ary ny avo indrindra dia tamin’ny 13/01/2006 izay nahatratra 11741
Manomboka mitranga ao amin’ny forum.serasera.org indray rehefa misy hafatra vaovao ao amin’ny namana. Isaky ny 10 minitra vao miova ilay filazana hoe hafatra vaovao. Aza gaga izany raha ohatra ka efa voavaky ilay hafatra nefa mbola misy hoe Hafatra vaovao ihany ao amin’ny forum.
Filed under: Uncategorized — serasera @ 10:58 am
Hevitra avy tamin’i DS hoe rehefa tsindrina ilay hoe "vakio" dia tokony hisokatra avy hatrany ny hafatra.
Vita izany amin’izao fotoana izao.
Fanampin’izany dia tonga dia azo sokafana amin’ny endrika toa izao ny hafatra tsirairay na dia tsy hafatra farany aza.
ka (parent_id) ny id-n’nymessage voalohany eo amin’ny lisitra
ary (message_id) ny id-n’ny message tiana hovakiana
Filed under: Uncategorized — serasera @ 10:50 am
Hohatsaraina ato ho ato ny tatitra halefa ho an’ny admin eto amin’ny serasera
Email iray isanandro ihany no hovoaray ka ao anatin’io email io daholo ireto tatitra manaraka ireto.
– Namana vaovao
– Namana nofafaina
– Sary vaovao
– Isan’ny hafatra nofafaina
– Isan’ny forum natao archives
– Tononkira vaovao avy ao amin’ny tononkira
– Ohabolana vaovao avy ao amin’ny ohabolana
– Lisitry ny lohateny tononkalo vaovao (avy ao amin’ny vetso.serasera.org)
– Takelaka vaovao (avy ao amin’ny takelaka.serasera.org)
Ny antony tena handefasana ireo amin’ny alalan’ny email dia mba ahafahan’ny tsirairay mandray ny anjarany amin’ny fandrindrana (ohatra izay mpandrindra sary afaka mamafa sary sns)
Filed under: Uncategorized — serasera @ 12:05 am
Manomboka izao dia mampiasa ny solonanarana sy tenimiafina serasera vao afaka manoratra ao amin’ny wikianja
Filed under: Uncategorized — serasera @ 11:27 am
Havaozina tsikelikely koa ny wikianja amin’ity herinandro ity. Ny wikianja moa dia toerana ahafahanao manoratra malalaka zavatra izay tianao… dia tena malalaka tokoa. Amin’izao fotoana izao aloha dia ny mombamomba fanampin’ny namana tsirairay no tena ho hitanao ao fa mbola azo itarina ho ngeza be.
Raha ohatra ka mangamanga be fotsiny no hitanao dia ampiasao ny touche F5 fa mbola ilay wikianja taloha izay no voatahirin’ny ordinatera.
Ilay olana ao amin’ny dinika.
Filed under: Uncategorized — serasera @ 10:57 pm
Ny olana tao amin’ny dinika dia mety mifandray amin’ny fahana RSS izay vao nampidirina sy nohatsaraina tamin’ity tao vaovao ity. Nisy variable $msg izay mbola nihainohaino tamin’ilay fahana RSS ka mety iny no raisin’ny hafatra. Ho hita eo ny vokany.